DOWNLOAD AIMP MAKA GAM AKPORO - A GAM AKPORO - 2019
AIMP maka gam akporo
A na-ewere Google ka ọ bụrụ ihe nchọgharị na-ewu ewu ma dị ike n'Ịntanet. Usoro nwere ọtụtụ ngwaọrụ maka ọchụchọ dị irè, gụnyere ọrụ nyocha foto. Ọ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ enweghị ozi zuru ezu gbasara ihe ahụ ma nwee nani foto nke ihe ahụ dị n'aka. Taa, anyị ga-atụle otu esi emejuputa ajụjụ ọchụchọ, gosi Google foto ma ọ bụ foto na ihe achọrọ.
Gaa na isi peeji nke Google ma kpatụ okwu "Foto" dị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo.
Akara nwere foto igwefoto ga-adị na ebe nkesa. Pịa ya.
Ọ bụrụ na ị nwere njikọ na ihe oyiyi dị na Ịntanetị, debe ya n'ime eriri (taabụ "Tọọ njikọ" kwesịrị ịdị n'ọrụ) ma pịa "Search site image".
Ị ga-ahụ ndepụta nke nsonaazụ ndị jikọtara na foto a. Ịga na ibe ndị dị, ị nwere ike ịchọta ozi dị mkpa maka ihe ahụ.
Ozi enyemaka: Otu esi eji ntughari elu Google
Ọ bụrụ na ihe oyiyi dị na kọmputa gị, pịa na "Gbasaa Njikwa" taabụ wee pịa bọtịnụ nhọrọ nhọrọ. Ozugbo eburu foto a, ị ga-enweta nchọta ọchụchọ ozugbo ahụ!
Hụkwa: Otu esi achọ foto na Yandex
Na ntuziaka a, ị nwere ike ịhụ na ịme ajụjụ nyocha site na oyiyi na Google dị mfe! Akụkụ a ga-eme ka nyocha gị dị irè.